I-Realme 3 Pro, i-terminal iza kwi-dethrone Xiaomi [Uhlalutyo] | Iindaba zeGajethi
I-Realme 3 Pro, i-terminal iza kwi-dethrone Xiaomi [Uhlalutyo]
Amabhaso anokhuphiswano ngakumbi nangakumbi kumbindi ophakathi, kakhulu kangangokuba intengiso ephezulu iyasondela ekufikeleleni kumsebenzisi oqhelekileyo obheja ngexabiso elifanelekileyo lemali, evuma ukushiya ezinye zeempawu zepremiyamu ukuze agcine ii-euro ezimbalwa. . Uyazi kakuhle Realme kwaye ijolise ikakhulu kubaphulaphuli abancinci, ukubanika kanye le nto bayifunayo.
Siza kuhlalutya iRealme 3 Pro, imodeli yakutshanje yohlobo lweAsia oluyinxalenye yeOppo kwaye enenjongo yokuma ngqo kwiXiaomi. Fumanisa kuthi ixabiso layo, iimpawu zayo kunye nayo yonke into ekufuneka siyithethile ngayo.
Njengesiqhelo, siza kuvavanya ngocoselelo amacandelo abaluleke kakhulu njengoyilo, izixhobo kunye nezixhobo, kodwa asilibali amava omsebenzisi kunye neemvakalelo zobuqu ezisinikwa yiRealme 3 Pro.Ukuba unomdla, ungayithenga ngqo kwiwebhusayithi yakho, kuphela inqaku lentengiso. Nangona kunjalo, Ndiyakumema ukuba uye kwividiyo ekhokela eli nqaku, eyona ndlela yokubona bukhoma ukuba le Realme 3 Pro iziphatha njani Ukusetyenziswa kwesiqhelo, kunye neemvakalelo ezishiye thina.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Ukujongwa kokuqala okumnandi okuhlaziya ngokweenkcukacha
3 Ikhamera kunye nemultimedia: Iphaneli enkulu kunye nekhamera ngokwexabiso
4 Ukuzimela, umdlalo wokudlala kunye namava omsebenzisi
Uyilo kunye nezixhobo: Ukujongwa kokuqala okumnandi okuhlaziya ngokweenkcukacha
Sifumana isiphelo sendlela esiya kuthi ngokuqinisekileyo sikhumbuze abanye njengeNqaku leRedmi elivela kwiXiaomi okanye i-M20 evela kwaSamsung, eminye imigca ephawuliweyo, imibala eyoyikisayo kunye nekhamera emi nkqo ngenzwa yayo ephindwe kabini kunye nesibane se-LED, sikhatshwa yiminwe yeminwe ebekwe kakuhle ngasemva apho kuphela imigca iya kukhanya. iphefumlelwe yisekethe yeLe Mans kwaye iqaqambisa i-Lightnin Purple kunye neNitro Bule gradient esiya kuba nakho ukuyifumana, ewe, kuphela loo mibala mibini.
Sinezakhelo ezincinci ngaphambili kunye nohlobo olwehlayo "inotshi" eyenza uninzi lwepaneli kwaye apho ikhamera yeselfie iya kubakho khona, eli qela liza kuba neGorilla Glass 5 yokukhusela kunye neglasi enomoya omiselweyo kwangaphambili. Kubonakala ngathi yinkcukacha yokwenyani. Umva ujikelezwe kancinane kwimiphetho ejikelezileyo ukuyenza ibentle ngakumbi, ikwabonisa ukuba inobunzima kuphela 172 iigrem zobukhulu be-74.2mm x 156.8mm x 8.3mm, kuyathandeka ukuhambisa ngaphandle kwamathandabuzo. Okuninzi kuya kudibana nento yokuba yenziwe ngokupheleleyo ngeplastikhi, zombini isakhelo kunye nomva kunye ne-burr ejoyina iphaneli yangaphambili kunye ne-chassis yesixhobo. Kwinqanaba loyilo, akukho nto inokuphikisa, ijongeka intle kwaye kufuneka siyilinganise ngexabiso layo.
Ngoku kufuneka sithethe ngelinye lawona macandelo afanelekileyo, iRealme 3 Pro yezixhobo, yiyo loo nto Ndikushiya ngezantsi kwetafile eneenkcukacha ke unokuzijonga ngesibetho.
Ukucaciswa kobugcisa iRealme 3 Pro
Umzekelo 3 Pro
Inkqubo yokusebenza I-Android 9.0 Pie enombala we-OS 6.0
Isikrini I-6.3-intshi ye-OLED enesisombululo esipheleleyo se-HD se-2.340 x 1.080 pixels kunye ne-19.5: 9 ratio-409 PPP
Inkqubo I-Qualcom Snapdragon 710 8-core ukuya kuthi ga kwi-2.2 GHz
GPU I-Qualcomm Adreno 616
i-ram I-4/6 GB LPDDR4x
Ukugcinwa kwangaphakathi I-64/128 GB (iyandiswa nge-MicroSD)
Ikhamera esemva Inzwa yesibini: 16MP f / 1.7 Sony IMX519 + 5MP f / 2.4
Ikhamera yangaphambili MP engama-25 ene-f / 2.0 ukuvula
Conectividad I-Bluetooth 5.0 -I-Wifi Dual Band-DualSIM-eSIM-microUSB OTG-AGPS kunye ne-GLONASS
Ezinye izinto Inzwa yangemva yeminwe kunye nokuvulwa kobuso yikhamera- i-3.5mm Jack - irediyo ye-FM
Ibhetri 4.045 mAh kunye ne-VOOC ngokukhawuleza
Ubukhulu 74.2 mm x 156.8 mm x 8.3 mm
Ixabiso ukusuka kwi-199 euros
Ezi ziimpawu zayo eziphambili, sikhankanya ukusetyenziswa kweprosesa eyaziwayo Qualcomm Snapdragon 710 yokusebenza kakuhle nokuzimela, nangona kunjalo, Iinkcukacha zokuqala endingazithandiyo kukusetyenziswa kwe-microUSBAndikwazi ukuyiqonda kakuhle kwisiphelo se-2019 kwaye ngakumbi ndisazi ukuba indleko zokudityaniswa ayikho ngaphezulu kunentambo encinci ye-USB. Sineenguqulelo ezimbini ze-RAM kunye nokugcina esikukhethayo phakathi kwe-4/64 kunye ne-6/128, kunye ne-6 GB ye-RAM kunye neyunithi yokugcina eyi-128.
Kwelinye icala, nangona silonwabela unxibelelwano 3,5 mm jack, into eqondakalayo xa ucinga ukuba ijolise kubaphulaphuli abancinci nabasebenzayo, ngokunjalo FM unomathotholo, into esingenayo yi-NFC chip. Oku kuqhelekile kwiifowuni zolu luhlu kwaye le mvelaphi, ikakhulu ngenxa yokusetyenziswa kwayo okuncinci eAsia. Yiba njalo, I-NFC ayisiyonto esinokuthi siyiphose kwisiphelo seli xabiso. Ngokwenxalenye yayo, umfundi ofaka iminwe ngokukhawuleza kwaye ubekwe kakuhle.
Ikhamera kunye nemultimedia: Iphaneli enkulu kunye nekhamera ngokwexabiso
Kwiikhamera sifumana isivamvo esingasemva kabini, eyona iphambili ye-MP eyi-16 yenziwe nguSony, imodeli ye-IMX519, ixhaswe yi-5 MO sensor, ene-f / 1.7 kunye ne-f / 2.4 ngokwahlukeneyo. Siza kuba ne-Zoom x2 esemgangathweni. Nangona kunjalo, sifumana iifoto ezicutshungulweyo nakwimo yemveli, sinoluhlu oluphakathi olucocekileyo malunga noku. Kuyabonakala ikakhulu kuba umbala kunye neenkcukacha zompu zahluka kakhulu xa ujongwa kamva. Sincoma ukusebenzisa imowudi yombala ocacileyo Kwinkqubo yekhamera elula, ekwanemowudi esemgangathweni kwaye kunjalo nge-HDR, sikushiya iisampulu:
Imowudi yemizobo ayidanisi, nangona siphinda sibona izehlo ezicacileyo zesoftware, nangona kunjalo ... Ngaba ungacela ifoto engcono kwisiphelo sendlela esiqala kwi-199 Euro? Ndiyathandabuza kakhulu. Ikhamera ye-selfie ihlala kwi-25 MP nge-f / 2.0 ukuvula kunye nemowudi yobuhle engapheliyo. Iikhamera zezo zaphakathi kuluhlu oluphakathi: Ukulungiswa okuninzi, kuyakhuselwa kwiimeko ezifanelekileyo zokukhanyisa, ingxolo iqala ukubonakala ngaphakathi endlwini nasebusuku, kodwa ngaphezulu kokwanela usuku nosuku olufuna ukusetyenziswa ngumsebenzisi wesiphelo.
Ukuzimela, umdlalo wokudlala kunye namava omsebenzisi
Amava omsebenzisi we Umbala we-OS 6.0, umaleko wokwenza ngokwezifiso u-Realme okhwele kwi-Android 9.0 Pie (Asinazikhombisi zohlaziyo lwexesha elizayo) Ndiyifumanisa ilula, inombala we-pastel wombala kunye nobuncinci be-predominates, ndiyayithanda kwaye ndiyibeka kwindawo yam ephezulu yamandla esandla kunye neXiaomi MIUI, iphelelwe kuphela nge Android Stock kwaye kunjalo inguqulelo ethi One Plus inyuke.
Ngokuphathelele ibhetri, siza kufikelela ngokulula kwi iiyure ezisixhenxe zexesha lesikrini, Si Intlawulo ye-VOOC ekhawulezayo eya kusivumela ukuba sibe ne-100% yebhetri kwimizuzu nje engama-80, phantse isiqingatha sokuba kungathatha iRedmi Qaphela 7, nangona kunjalo, koku sisebenzisa i-microUSB, kwaye le yinto endinzima ukuyifumana. Ngokwenxalenye yayo, sinayo inkqubo eya kuthi ibone xa siqala umdlalo kwaye ndicebisa ukuba ubone kwividiyo, iyakusivumela ukuba sihlengahlengise izaziso, ukusebenza kunye noluhlu lweeparameter
Uyilo luyaqhubeka kodwa aluphumeleli kangako, kubonakala ngathi luyachasa
Ixabiso lomgangatho wexabiso liphezulu kakhulu
Ngokombono wam wobuqu umaleko we-OS yombala intle
Ukubonelela ngokusebenza okumangalisayo ngexabiso le- € 199
Isikrini sinesithunzi esimnyama emphethweni
Indlela yamaqhosha evolumu inokuphuculwa
Kwenziwe kakhulu ukufota
Ewe ine-microUSB ...
I-Realme 3 Pro -Screen
I-Realme 3 Pro-Ngasemva
I-Realme 3 Pro-logo
I-Realme 3 Pro-Iinkcukacha zangasemva
I-Realme 3 Pro-epheleleyo
I-Realme 3 Pro-Iikhamera
I-Realme 3 Pro-Iinkcukacha zangaphambili
I-Realme 3 Pro-iBezels
I-Realme 3 Pro-umfundi weFingerprint
I-Realme 3 Pro-yeeBezels esecaleni
I-Realme 3 Pro-Iinkcukacha
I-Realme 3 Pro-Ikhamera
Khumbula ukuba ungayithenga kwiwebhusayithi esemthethweni yeRealme yaseYurophu ngemibala emibini ekhoyo kusuku olulandelayo 5th kaJuni. Uya kuba nohlobo lwe € 199 nge-4GB ye-RAM kunye ne-64GB ukugcinwa, ngelixa ukusuka € 249 siya kuba ne-6GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcina, i- € 50 ityalwe kakuhle kule ndawo izibeka ngokucacileyo njengokhuphiswano lukaXiaomi eSpain, I-Realme ilapha ukuhlala kwaye sinethemba lokuqhubeka nokukubonisa iiterminal zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Realme 3 Pro, i-terminal iza kwi-dethrone Xiaomi [Uhlalutyo]
I-Atenea Fit, sihlalutye eli nqanaba likrelekrele kwaye liphelele kwi-SPC